Soomaalida oo tacaddiyo kala duwan kula kulmeysa Turkiga | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaalida oo tacaddiyo kala duwan kula kulmeysa Turkiga
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen shaqsiyaad ka shaqeeya kireynta guryaha, waxaa Soomaalida lagu siyaadiyey lacagaha kirada guryaha, taas oo lagu timaamay beegsi gaar ah iyo takoor gooni ah.
ANKARA Turkey - Kor u kaca nacaybka iyo takoorka ka dhanka ah ajaanibta ku sugan dalka Turkiga ayaa siyaadday, taasina waxa ay sababtay in bulshada Soomaaliyed ee ku dhaqan dalkaas iyo kuwa safarka ku marayaba la kulmaan tacaddiyo kala duwan.
Tan iyo dhamaadki sanadkii hore, waxaa la soo wariyay dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan Soomaalida iyo Siiriyaanka deggan Turkiga, halka maalmihii na-weydaartay uu xoogeystay beegsiga ka dhanka ah dadka ka soo jeeda Soomaaliya.
Sida ay muujinayaan warbixinno la xarira tacaddiyada ka dhanka ah Soomaalida, waxa ay dhibaatada ugu xooggan kula kulman garoomada diyaradaha, halkaas oo muddo lagu hakiyo iyaga oo aan heleynin wax xuquuq ah.
Sidoo kale, Booliska, ayaa shaqsiyaadka aan ogolaanshiyaha ku joogin dalka baacsanaya, waxayna taasi sababtay in tan iyo billowgii September 2021 dad badan ka baxaan Turkiga, iyaga oo ka baxsanaya sharci magaalooyinka qaar ka dhaqan galay sanadkaan.
Sucaad Maxamed Cali iyo caruurteeda oo heysta dhalashada boqortooyada UK, ayaa ka mid ah dadka dhibatooyinka todobaadkii hore kula kulmay gigida diyaaradaha magaalada Istanbul, waxaya ku dhawaad 24 saac ku xayirneyd sifo sharci darro ah.
Marka laga soo tago dhibaatada dhanka socdaalka ka heysta Soomaalida Turkiga ku safreysa, waxaa taasi barbar-yaalla caqabadda dhanka ganacsi ee ay la kulmayaan, iyadoo weli xabsiyada dalkaasi ay ku jiraan Soomaali xarumo ganacsi ka furatay Turkiga, halka kuwa kalana dalka lagu soo celiyey.
Dhibaato amni ayey sidoo kale wajahaan, waxaana dhac joogta ah dadka Soomaalida u geysta kuwa Turki ah, iyadoo dhawaan dalkaas lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ay tooreey ku dileen rag Turki ah oo dhac u geysanayey.
Sidaas oo jirta, haddana tirada ajaaniibta ku dhaqan Turkiga ayaa sii kordheysa, waxaana la sheegaa in ka badan, 1,200,000 oo qof oo soo galooti ah in ay ku sugan yihiin dalkaas, Soomaalia waa dalka 4-ad ee ardayda ugu badan wax ugu bartaan Turkiga, waxaana ka horreyeeya Turkmenistan, Azebaijan iyo İran.
Saddexda magaalo ee waaweyn, sida; İstanbul oo ay ku sugan yihiin 623,525 oo ajaanib ah, Ankara oo ay ku dhaqan yihiin in ka badan 100,000, iyo magaalo xeebeedka Antalya oo marti galisay ku dhawaad 130,000, ayaa sababtay in Hoggaamiyaha Mucaaradka ugu weyn Kemal Kılıcdaroglu, uu Xukuumadda Recep Tayyip Erdogan, ku eedeeyo in ay fureen xudduudaha dalka.
Taas oo sababtay in tan iyo billowgii sanadkaan la qabqabto in ka badan 100,000 oo qof oo sharciga dal ku jooggu u dhameystirneyn ama aan heysan, ku dhawaad 2000 oo qof oo Soomaali ah ayaa la sheegay in qabqabashada qeyb ka noqdeen.
Billowgii September, kulan ay wada yeesheen duqa magaalada Ankara, Maamulka İmmigration-ka Ankara, Maamulka ciidanka Jandarmaha loo yaqaano, Cutubyada kala duwan oo ka socday Booliska, iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha, ayaa lagu soo saaray amarro adag oo ka dhan ahaa Ajaanibta.
Amarradaas waxaa ka mid ahaa; in la joojiyay diwaangalinta soo galootiga Ankara si Kumeel gaar ah, lana xiray xudduudaha magaalada iyo in soo galootiga aan heesan sharci ay ku joogaan waddanka xabsiga loo dhaadhicin doono.
Cilaaqaadka ka dhexeeya Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa muddo toban sano ah gaaray meel aad loo amaanay, kaas oo ka soo bilowday booqashadii Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay Caasimadda Muqdisho, toban sano ka hor bishan.
Booqashada Erdogan, oo xilligaas ahaa Ra’iisul Wasaaraha dalkaas, waxa ay soo dedejisay ololihii bini'aadantinimo ee ugu weynaa taariikhda Turkiga. Laba bilood gudahood, deeqaha dadweynaha iyo dhaqaalaha gobolka oo la isku daray ayaa gaaray $300 milyan.
Ankara ayaa sidoo kale soo qaban qaabisay shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) waxayna ku qancisay dowladaha xubnaha ka ah in ay soo uruuriyaan lacag dhan 350 milyan oo dollar oo loogu talagalay gurmadka abaarahii xilligaas ka taagnaa Soomaaliya.
Gargaarka bini'aadantinimo ee Turkiga ayaa sii socday xitaa ka dib markii Qaramada Midoobay ay ku dhawaaqday inay dhammaatay macluushii 2012. Isla sanadkaas, Soomaaliya waxay noqotay dalka labaad ee ugu badan ee gargaarka degdegga ah helay, waana dalka shanaad ee ugu badan ee gargaar guud ka helay Turkiga.